Bazoliphika elokubulala uDewani | isiZulu
Bazoliphika elokubulala uDewani
Imibiko ehambelanayo Lihlehlele uJulayi elikaDewani
Bazovela enkantolo abasolwa kwelikaDewani Cape Town - Abasolwa ababili ababhekene necala lokubulala umshadikazi u-Anni Dewani bazoliphika icala uma bebhekana nejaji eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape, ngenyanga kaJulayi.
UXolile Mngeni noMziwamadoda Qwabe bavele ngaphamb kwenkantolo ngoLwesihlanu.IJaji u-Andre le Grange ukhombise ukukwethakasela ukuthi selizoqala icala, njenghoba belilokhu lihlehla kusukela ngenyanga ka-Ephreli."Akusekude kuqedwe ngaleli cala, lizoqala lithethwe nenyanga kaJulayi mhlaka-30," kusho uLe Grange.
Umshushisi woMbuso uShareen Riley uthe abameli babamangalelwa baveze ukuthi abamangalelwa bazolandela icala ngaphansi kwesigaba-220 somthetho obhekene namacala. Lokhu kusho ukuthi abamangalelwa bazovuma amaqiniso abawatshelwayo bese esetshenziswa njengobufakazi.
Abasolwa bebebukeka bezothile enkantolo, uMngeni yena oke wathola ukuhlinzwa ekhanda kulandela ukuba nesimila emqondweni naye ubebukeka ephila ngokwanele ukuthi angabhekana necala.